Umsakazo wethulelwa isigqoko emhlabeni | Bayede News
Home/ Imbiza/Umsakazo wethulelwa isigqoko emhlabeni
Umsakazo wethulelwa isigqoko emhlabeni
ISONTO esiphuma kulo belibaluleke kakhulu emhlabeni ngokuthi i-United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) igubhe ngokwesishiyagalombili iWorld Radio Day. Lolu wusuku lapho umhlaba wonke usuke uhalalisela umsakazo ngendlela oguqula ngayo impilo yomphakathi. Kulo nyaka lokhu kwenzeke ngoLwesithathu zili-13 kuNhlolanja. Indikimba yalo nyaka bekuwukukhuthaza ‘ukuxoxisana, ukubekezelelana noxolo’.
Umbuzo ophezulu ezinhliziyweni zabantu yilona othi esikhathini lapho ezokuxhumana sezithuthuke kangaka, sekukhona amaselula, amatablets namacomputer pho usabaluleke ngani umsakazo? Impendulo yalapho kungaba wukuthi umsakazo usenamandla okufundisa njengoba kwakunjalo ekuqaleni. Uyindlela yokufinyelela ezindaweni eziqhelile lapho ezinye izinhlobo zokuxhumana zingafinyeleli khona. Umsakazo uhlanganisa abantu nemiphakathi, ukhuthaze ingxoxo ukuze kukhuthazeke uguquko noxolo. Lapho umsakazo ufika khona unikeza ulwazi oluyilo oluzokwenza umehluko phakathi kwesivuno nendlala naphakathi kokufa nokuphila.
Kusengumsakazo wodwa okwazi ukufinyelela kubantu abaningi ngesibalo ukwedlula ezinye izinhlaka zokuxhumana. Uma kukhulunywa ngethuluzi elikwazi ukuthi lifinyelele kwabampofu, abacebile, abafundile nabangafundile babo bonke ubulili nobuzwe usuke ukhuluma ngomsakazo. Unjalo nje umsakazo ukhuluma zonke izilimi kanti awuphelelwa wumoya njengeselula. Ezwenikazi i-Afrika umsakazo kuseyiwona olalelwa nothenjwe kakhulu ngabantu ukubalethela ulwazi. Wedlula i-inthanethi, ithelevishini namaphephandaba. Izinhlelo zomsakazo zakha ukubekezelelana ngokuhlanganisa abantu ngaphansi kwenhloso eyodwa njengokushabashekela imfundo yezingane noma ukubhekana nezingqinamba zezempilo emphakathini. Umsakazo ushibhile, uyaphatheka futhi wethembekile. Nanamuhla abantu base-England basakholelwa kakhulu ezindabeni abazilethelwa yiBBC World Service njengoba nabaseNingizimu Afrika besakholelwa kakhulu ezindabeni ezilethwa yiSABC.
ENingizimu Afrika uma kukhishwa izibalo zokulalelwa kwemisakazo zizidlulela kude le ezokubukwa kwethelevishini. Lokhu kuchitha inkolelo eyake yaba khona kufika ithelevishini ukuthi yayizele ukuzogudluza umsakazo bese kukhonya yona. Izibalo ezikhishwe kamuva eTanzania naseKenya zikhomba ukuthi amaphesenti angama-83 abantu abadala baseTanzania bathola ulwazi emsakazweni, kuthi abaseKenya babe ngama-89%. EzaseNingizimu Afrika izinombolo azibekwanga ngamaphesenti kodwa kudalulwe inani eliyisigaxa labantu abayizigidi ezingama-35 abakhetha ukulalela umsakazo. Lesi yisibalo esigcizelela ubuvava nokukhonya komsakazo kwezinye izinhlaka zokuxhumana ezisibaya sinye nawo.
eNingizimu Afrika umsakazo ubonakala ulandela ngesineke kokuyindikimba ye-UNESCO yokukhuthaza ‘ukuxoxisana, ukubekezelelana noxolo’. Imisakazo enjengoSafm; o-Ukhozi fm ibonakala ikukhuthalele ukuvula izinkundla zokuxoxisana lapho kungabonwa khona ngasolinye. Lokhu sekwenabele nasemisakazweni yemiphakathi efana no-Inanda FM, iVibe ne-Izwi Lomzansi. Kubanjwa ezishisayo izingxoxo phakathi kwamaqembu epolitiki kuphunywe lapho kuyobuswa ndawonye. Njengoba iNingizimu Afrika iya okhethweni lukazwelonke ngoNhlaba walo nyaka kusabhekwe yona imisakazo ukuthi iqhubeke nokugxilisa izingxabo zedemokhrasi ngokukhuthaza ‘ukuxoxisana, ukubekezelelana noxolo’ phakathi kwamaqembu azobe ekhankasela ukhetho. Akugcini ngepolitiki ngoba nalapho kuhlukunyezwa khona abesifazane, abebala elimhlophe, izingane nabathandana benobulili obufanayo kuthenjelwe kuwona umsakazo ukuthi utshale imbewu yothando.
Lapho umsakazo usengenza kangcono khona yisekubhekaneni ngokungesabi nokuyizingxabo zezinkinga ezidala ukungabekezelelani nodlame emiphakathini yamazwe asathuthuka. Kuleli nje, abantu bakhungethwe wukweswela imisebenzi ngenxa yomnotho otshekele kwabayidlanzana. Kuyajabhisa ukulalela iziteshi eziningi zomsakazo uma kuyilanga langeSonto ziqhulula izingoma zaphesheya kwezilwandle ilanga lonke zishiya owasekhaya. Umculo wasekhaya unothe ngokwanele ukuthi imisakazo ingabamba ngawo iqhaza lokwenza ngcono impilo yamaciko ngokudlala umculo wawo. Yonke indawo lapho kukhona imisakazo mazidle ekhaya. Uma kwenzeke njalo, imigubho yeWorld Radio Day iyothola izibusiso eziphelele kubalaleli namaciko athembele emsakazweni ukwenza ngcono izimpilo zawo ngamaroyalties okuyizibonelelo amaciko azithola ngokudlalwa komculo wawo.
Le ngosi iyalinanela ele- UNESCO elithi: ‘Nangowe-2019, umsakazo usafanele ukwethulelwa isigqoko emhlabeni ngokuthi kuhlonishwe usuku iWorld Radio Day’, kodwa futhi kukhona okungaphezulu umsakazo osengakwenza.’
Ithemba likhulu kuSharks bonke bayimiqemane
Izingxoxo zokuvuselela iKolishi LaMakhosi
UTu Nokwe akapheli moya endimeni yezobuciko
UBosman wayebuqonda abudlulise ngosiba ubuwula bobuhlanga